नेपाली मन र माटो जोड्ने किरणको त्यो गायकी - Naya Online
नेपाली मन र माटो जोड्ने किरणको त्यो गायकी
शनिबार, साउन ३०, २०७८ (August 14th, 2021 at 7:35am ) ब्रेकिंग न्युज, साहित्य
लामो समयको पर्खाइपछि बल्ल उद्घोषकले ‘द भ्वाइस अफ नेपाल, सिजन–३’ को विजेता टिम प्रमोद ‘किरण गजमेर’ घोषणा गर्दै गर्दा सायदै यहाँ बिहानको ४ बजेको हुँदो हो । त्यो पल हामी भुटानी शरणार्थीहरूको त्यो स्वर्णिम इतिहास थियो । जुन इतिहास रच्न हामीले वर्षौ कुर्‍यौं । एकाधबाहेक हामीले हेपाइ सह्यौँ, आफ्नै मुलकाहरूबाट घृणा सह्यौँ । त्यसको पीडा हामीसँग छ । यी नै पीडाहरू बिर्साउने गरि भुटानी शरणार्थी झापाको बेलडाँगी र पथरी शनिश्चरेको छाप्रोहरूबाट सुरु भएको कनिकुथीको सारेगम…. किरण गजमेरले नेपालकै प्रतिष्ठित ‘भोइस अफ नेपाल’को उपाधी उचाल्यो ।
हामी भुटानी शरणार्थीको नामले तेश्रो मुलुक स्थानान्तरणको क्रममा जे जति वटा मुलुकहरूमा छरिएर रहेका छौँ एक साथ हामी गहभरि आँशु जमाउँदै खुशी साट्यौँ कतिले दिपावली गर्यौँ । हामीले त्यो दिन नयाँ इतिहास रचेको महसुस गर्‍यौं। मन खुशीले गद्–गद् र फुरुङ्ग नहुने कुरै भएन । सामाजिक सञ्जालभरि किरणको नाम छायो । बधाई तथा शुभकामनाहरूको ओइरो थियो । पोस्टहरू हेरियो, एकदुइजनासँग च्याट, कमेन्टमै भए पनि सबैसँग खुशी साटियो । त्यसपछि २ घण्टाको निम्ति भए नि सुतियो । खाना नाना र छानाको निम्ति काममा पुग्नु छँदैथियो ।
किरण ! भुटानले जब अनागरिक सम्झेर चिलबिल पारेर हामीलाई खेदायो तब भूटानी शरणार्थी नामको बुबाआमाले तिमी हामीलाई बाँसले बारेको सानो झुप्रो जन्म दिनुभयो । हामीले झण्डै २ दशक शरणार्थी जीवन बिताउँदा हामीले देखेको सपनाहरू पुरा गर्न कति कठिन थियो हगि ? नेपालले हामीलाई आफ्नो वंशज या नेपालीत्व सम्झेर शरण दियो । त्योभन्दा देवत्व हाम्रो निम्ति के होला र ? त्यसका बाबजुद हाम्रो निम्ति गौण पक्षहरू धेरै थिए । नेपालमा आफ्नो सपना पुरा गर्न पहिलो कुरा त नेपालको नागरिक हुनपथ्र्यो, जुन विश्वव्यापी शर्त नै हो त्यो ।
दोश्रो, आफू आर्थिक रूपले सक्षम हुनुपथ्र्यो । तर हामी शरणार्थीसँग त्यो सम्भव कहाँ हुन्थ्यो र ? जुन कुरा हामीभन्दा परको कुरा थियो । त्यो बेलाको सानो तिमी, शिविरमा भएको हरेक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी भई आफ्नो प्रस्तुति दिएर धेरैको मन जित्न सफल हुन्थ्यौ । हामी तिम्रो गायनबाट तृप्त भएर तिम्रै कुरा गर्दै घर फिथ्र्यौँ । त्यो बेलाको अभावग्रस्त जिन्दगीमा पनि तिमीले कहिले हिम्मत हारेनौ ।
हिम्मत हार्नुको साटो जिन्दगीमा तिमी झिनो आशा लिएर सपना देख्न छाडेनौ । हामीलाई शरणार्थी हैन आफ्नो सन्तान सम्झेर हामीलाई बारम्बार सत्कर्म र असल बाटो देखाउनुहुने हाम्रो अभिभावक प्रकाश आङदेम्बेले भन्नु भएजस्तै हामी शरणार्थी भए पनि हाम्रो कला, साहित्य र सृजना कहिले शरणार्थी हुँदैन भन्ने भनाईलाई तिमीले कहिल्यै बिर्सेनौ र सपना देखिरह्यौ, जुन तिमीले आज प्रमाणित गर्यौ र साकार गर्‍यौं । अनि भूगोलको कुनाकाप्चामा रहेका नेपाली मनलाई तिम्रो सुमधर स्वरले जोड्यौ ।’
हुन त तिमी सदा अब्बल थियौ । तिम्रो साथीसँगीलाई तिम्रो सुरिलो आवाजले मख्खै पाथ्र्यौ । सबैमा त्यो क्षमता कहाँ हुन्छ र ? नेपालकै प्रतिष्ठित रियालिटि सो ‘भोइस अफ नेपाल’को ‘सिजन थ्रि’मा सहभागी हुन अगाडी पनि धेरै नै मिठो गीतहरूमा गायन र संगीत दिइसकेका थियौ । तिमी सुन्दर गायक हौ भन्नेमा दुई मतै थिएन तर समाजको साँघुरो बुझाई भूटानी शरणार्थीमा मात्रै ।
तर यो उपाधीले प्रमाणित गरिदियो अब तिमी संसारभरी छरिएर बसेका सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूको गायक, सम्पत्ती हौ । हामी भूटानी शरणार्थीहरूमा साहित्य, संगीत र सिर्जनामा अब्बलता छ भन्ने प्रमाणित गरिदियौ । त्यसैले तिमीले जितेको उपाधीलाई हाम्रो उपाधी सम्झेका छौँ । हामी भावविह्वल छौँ, गौरवान्वित छौँ ।’
तिम्रो जितमा केही नेपालीभाषीहरूले डलरेको आरोप लगाए । हामीले शरणार्थी शिविरमा रहँदा पनि कुन गतिलो जीवन जिएका थियौँ र ? एकाधको मायाबाहेक धेरै त तिरस्कार नै सहेका थियौँ नि । जुन तिरस्कार भोइसमा पनि किरणसँगै सिङ्गो भूटानीहरूले सह्यौँ । तर हामीलाई त्यसमा कुनै गुनासो छैन बरु किरण र नेपाली संगीतको जीतमा खुशी साटासाट गरिरहेका छौँ । किरण ! यो तिम्रो मात्र जित नभएर विश्वभर छरिएर बसेको सम्पूर्ण नेपालीभाषी भूटानी, नेपाली भाषा, कला, साहित्य, संगीत, सिर्जना र सस्कृतिलाई प्रेम गर्नेहरूको जित सम्झेका छौँ ।
अझ तिमीले टाइटल जितेपछि दिएको अभिव्यक्तिले तिमीले हाम्रो मानवता बाँड्यौ । तिमीले धरातल भुलेनौ । हो हामीले अरुले दिएको थाल थापेर खाएकै हौँ । यसमा लाज मान्न पर्ने कारणै छैन । बरु हाम्रो भोगाई सबैसामु पुगेको महसुस भयो । अझै ७/८ हजार शिविरमा रहेका शरणार्थीहरूलाई एम्बुलेन्स प्रदान गर्ने तिम्रो महानता, उभ्रेको रकम साक्षात सरस्वती आफ्नो आमाको हातमा रु. १ हजार रूपैयाँ थमाउने उद्घोष, रविको आमाको हातमा भोइसको टाइटल थमाउने प्रविद्धताले तिम्रो अरु महानता थपिएको छ ।
किरण तिमीले भने जस्तै भूटानी शरणार्थीले चाहेर पनि नपाएको तिम्रो हाम्रो नेपाली नागरिक्ता यही भोइसको टाइटल हो । तिम्रो यो भनाईले म धेरैबेर भक्कानिएँ किरण । किरणसँगै शरणार्थी जीवन बिताएका हामी यो त भन्छौँ नै शिविरको हिजोको अभावमा शरणार्थी जीवन बिताउँदा होस् या आज अस्ट्रेलिया, अमेरिका, केनेडामा जस्तो देशमा थोरै भौतिक सुख सम्पन्नताले जीवन बिताईरहँदा होस्, हाम्रो नेपालीमन र नेपालीपनमा कहिल्यै कमी थिएन, छैन र हुनेछैन पनि ।’
‘किरण ! मैले तिमीलाई नजिकबाट चिने र जाने अनुसार तिमी एक असल, सफल र बहु प्रतिभाशाली कलाकार हौ । म लेख्नेभन्दा पनि सुन्ने मान्छेमा पर्छु तर तिमीले कुनै दिन भनेका थियौ ‘तिम्रो लेखाईको फ्यान हुँ म ।’ तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । अब म तिम्रो गीत संगीतको ठुलो फ्यान भएकी छु । तिमी भावी पुस्ताको लागी प्रोत्साहान हौ, प्रेरणा हौ, चम्किलो तारा हौ । तिम्रो बाँकी सांगीतिक यात्रा शुभ रहोस् ।
शुभेच्छा किरण ।
कुख्यात डाँकु समूहको ग्याङ लिडरदेखि राजनीतिमा एमपीसम्मको फूलनदेवीको संक्षिप्त जीवन–कहानी
उदय पूर्वेली चोङबाङक्याक भारतको उत्तरप्रदेश, जालौन जिल्लाको गोराहास्थित सानो गुमनाम गाउँमा अत्यन्तै उपेक्षित र...
नेपाली समाज युकेमा बसुन्धरा याक्खाको दाबी
नेपाली समाज युकेको अध्यक्षमा श्रीमती बसुन्धरा याक्खा राईले उम्मेद्वारी दिएकी छिन् । अधिवेशन १३...
काठमाडौ – लिम्बू भाषाको पालाम ‘सिरिजङ्गा तङ्नाम’को शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । सिक्किमस्थित मार्ताम,...
पान्थर, ६ माघ । लिम्बु भाषाको गीत ‘हुक्फोलो’ को भिडियो बिहिवार सार्वजनिक भएको छ...
जोसियल नेटवर्किङबाट महिनामा लाखौं कमाइने भन्दै करोडौं ठगी गरेपछि सम्पर्कवीहिन
काठमाडौं, २८ पुस । पछिल्लो समय नेटवर्किङ व्यावसायबाट ठगीनेहरुको सङ्ख्या बढ्दो छ । विभिन्न...
चासोक कि चासोत ? येले तङबे कि कक्फेक्वा तङनाम ? संक्षिप्त टिप्पणीः
-उदय पूर्वेली चोङबाङक्याक चेम्जोङ (१९७८) का अनुसार; आद्य प्रागैतिहासिककालमा याक्थुङ जातिको उद्भाव थलो मुना...